सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ७ फागुन २०७४) | गृहपृष्ठ
आइतवार, असार १०, २०७५
As of 2018-06-24 11:06:42
AMFI 430 (10) (20)
JBNL 153 (252) (0)
LLBS 1100 (99) (-5)
MEGA 176 (1688) (-2)
MSLB 2600 (20) (-80)
NLIC 1027 (100) (20)
NMBMF 1420 (105) (-4)
SLBS 1580 (20) (0)
UMB 2000 (10) (-37)
Home लगानी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ७ फागुन २०७४)
लगानी 108 views
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ७ फागुन २०७४)
गत कात्तिकमा सम्पन्न १६औं वार्षिक साधारणसभाले प्रस्ताव गरेको ३५ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्न अनुमति माग्दै कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उक्त हकप्रद शेयरको विक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा उसले ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो ।
पूँजी वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न कम्पनीलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ । यो अवधिमा उसको पूँजी ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोे छ भने वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ४८ दशमलव ३६ रुपैयाँबाट घटेर २७ दशमलव ३९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
बीमाकोषमा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तथा जगेडा कोषमा ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ ।
कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन रकम १८ प्रतिशत वृद्धि भएर ८७ करोड १२ लाख पुग्दा खुद बीमा शुल्क आम्दानी गत त्रैमासको भन्दा १३ प्रतिशत वृद्धि भएर ४४ करोड ९५ लाख पुगेको छ ।
यस त्रैमाससम्ममा कुल दाबी भुक्तानी रकम ३५ प्रतिशत वृद्धि भएर ४६ करोड ३८ लाख छ । त्यस्तै, खुद दाबी भुक्तानी २० करोड ४८ लाख छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४३ प्रतिशत धेरै हो ।
कुल दाबी भुक्तानी सङ्ख्या २ हजार ५ सय २८ छ भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी सङ्ख्या २ हजार ४ सय ३२ छ ।
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासमाप्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक) २७ दशमलव ३९ रुपैयाँ, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ९२ दशमलव ७३ रुपैयाँ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य ४ सय ३५ दशमलव ९८ रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको बीमा शुल्क आम्दानी, खुद मुनाफामा गरेको वृद्धि सकारात्मक छ । तर, चुक्तापूँजी वृद्धिसँगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्नु कम्पनीको नकारात्मक पक्षको रूपमा छ । साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीलाई प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांशलाई सन्तुलनमा राख्न थप चुनौती थपिने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स घट्दो प्रवृत्तिमा
प्रतिरोध २ : ९८५ । प्रतिरोध १ : ९५५ । हालको अन्तिम मूल्य : ९२७ । टेवा १ : ८८४ । टेवा २ : ८४५
यस कम्पनीको १८ फेब्रुअरी, २०१८ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टको आधारमा अन्तिम कारोबार मूल्य ९ सय २७ मा छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको भन्दा २३ रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ४२ प्रतिशत कम हो । त्यस दिनको परिमाण ३ हजार २ सय २२ मा छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा १ हजार २ सय ६ कित्ता कम हो ।
मूल्यको प्रवृत्ति विश्लेषण
चार्टमा देखिएबमोजिम बजारका उच्चतम बिन्दु र न्यूनतम बिन्दुहरू घटिरहेकोले बजार ४ महीनादेखि घट्दो प्रवृत्तिमा देखिन्छ । हाल मूल्य ९ सय ५५ को प्रतिरोध तोड्न असफल रहेको छ ।
अन्य प्राविधिक सङ्केतहरू :
एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : ३१ दिनको ईएमएभन्दा मूल्यको प्रवृत्ति तल रहेकोले बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको र हाल यो ईएमए प्रतिरोधको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ३९ अङ्कमा छ । यसको प्रवृत्तिले मूल्य केही सकारात्मक हुन सक्ने सङ्केत गरे पनि निश्चित रूपमा गरेको देखिँदैन ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले त्यस दिन बजारमा विक्रेताको चाप रहेको र अर्को दिन पनि विक्रेताको चाप हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
उल्लिखित मूल्यको प्रवृत्ति र सूचकहरूको आधारमा बजार विश्लेषण गर्दा मूल्य ९ सय ८५ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार सकारात्मक हुन सक्ने प्रबल सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै, ८ सय ८४ भन्दा तल रहेमा बजार नकारात्मक हुन सक्ने सङ्केत गर्दछ ।
१० असार २०७५, आईतवार १०:४८
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १० असार २०७५)
१० असार २०७५, आईतवार १०:४१
नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १० असार २०७५)
१० असार २०७५, आईतवार १०:३७
वाणिज्य बैङ्क र मर्चेण्ट बैङ्करलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ
१० असार २०७५, आईतवार १०:०९
न्यूबिज बी–स्कूल रेटिङ–र्‍याङ्किङ अवार्ड २०१८ सम्पन्न
के हो अग्राधिकार शेयर ?
किन ढिलो हुन्छ धितोपत्र निष्कासनको प्रस्ताव स्वीकृत हुन ?
नेपाल ईयूको सुरक्षा चासोबाट हट्ने विषयमा अध्ययन गर्न ईयू टोली नेपाल आउँदै छ
आस्फाल्ट प्रविधिबाट रुकुम पूर्व–पश्चिममा सडक